Vaovao - Miakatra indray ny vidin'ny vy eoropeana rehefa miadana ny fandrahonana
RIASA ASA MASINA
RIASA ASA MAFANA
RABE VITSY avo
FANASAN-KEVITRA vita farany
TRANONY FLAT BAR
BLANKS FITIAVANA CIRCULAR
Miverina ny vidin'ny vy eoropeana rehefa miadana ny fandrahonana
Ny mpividy eropeanina ny vokatra vita amin'ny vanja dia nanomboka nanaiky tsikelikely ny fiakaran'ny vidin'ny fikosoham-bary, tamin'ny tapaky ny volana desambra 2019. Ny famaranana ny fizotran'ny asa lava dia nitarika fanatsarana ny fangatahana hita. Ankoatr'izay, ny fanapahana famokarana, notontosain'ny mpanao vy any an-toerana, tamin'ny faran'ny taona 2019, dia nanomboka nanamafy ny fahazoana ary nanitatra ny fotoana fitarihana. Ireo mpamatsy firenena fahatelo dia nanomboka nampiakatra ny vidin'izy ireo, noho ny fiakaran'ny vidim-bokatra. Amin'izao fotoana izao, ny teny notsongaina avy any ivelany dia 30 € eo ho eo isan-taonina ho an'ny tolotra an-trano, ka lasa vitsy ny mpividy eropeanina.
Ny tsena vy, tamin'ny voalohan'ny volana Janoary 2020, dia niadana, rehefa niverina avy tamin'ny fankalazana ny Noely / Taom-baovao. Ny fiakaran'ny volan'ny asa ara-toekarena dia vinavinaina ho maotina, amin'ny fotoana fohy. Mitandrina ny mpividy, matahotra fa, raha tsy mivoatra be ny tena fangatahana dia tsy maharitra ny fiakaran'ny vidim-piainana. Na eo aza izany, manohy miresaka ny vidiny miakatra ny mpamokatra.
Nangina ny tsena Alemanina, tamin'ny voalohan'ny volana Janoary. Nambaran'i Mills fa manana boky milamina tsara izy ireo. Ny fihenan'ny fahaiza-manao notanterahina tamin'ny faramparan'ny taona 2019 dia nisy fiatraikany tsara tamin'ny vidin'ny vokatra namboarina. Tsy nisy naoty na hetsika lehibe nampidirina. Ireo mpanao vy eto an-toerana dia manery ny fampitomboana bebe kokoa amin'ny faran'ny telovolana voalohany / am-piandohan'ny telovolana faharoa.
Nanomboka niakatra ny vidin'ny vokatra namboarina frantsay tamin'ny tapaky ny volana desambra 2019. Noraisina ny hetsika alohan'ny fialantsasatry ny Noely. Nihatsara ny bokin'i Mills. Vokatr'izany dia nitatra ny fe-potoana fitarihana. Ireo mpamokatra UE ankehitriny dia mitady hampihatra ny fiakaran'ny vidiny € 20/40 isan-taonina. Ny varotra mill tamin'ny volana Janoary dia natomboka miadana. Ny tsena any ambany dia mavitrika kokoa ary ny mpaninjara dia manantena ny hijanona ho mahafa-po ny orinasa. Na izany aza, ny fangatahana avy amin'ny sehatra maro dia mety hihena, raha oharina amin'ny tamin'ny taon-dasa. Tsy azo ifaninanana intsony ny teny nindramina, izay nisondrotra be.
Nahatratra ny farany ambany ny tarehimarika vita amin'ny famokarana italiana, tamin'ny faran'ny volana novambra 2019. Niakatra kely izy ireo tamin'ny fiandohan'ny volana desambra. Nandritra ny tapa-bolana farany tamin'ny taona dia nisy ny fitakiana fifohazana ny fangatahana, noho ny hetsika famerenana amin'ny laoniny. Niakatra hatrany ny vidiny. Hitan'ny mpividy fa tapa-kevitra ny hampisondrotra ny soatoavina ifotony ny mpanao vy mba hanonerana ny fiakaran'ny vidin-tsakafony. Nahazo tombony ihany koa ireo fikosoham-bary tamin'ny fihenan'ny fikorontanan'ny fanafarana firenena fahatelo, satria ny ankamaroan'ny mpamatsy dia nanandratra ny teny nindramina. Ny fotoana fitarihana dia mitatra noho ny fahatapahan'ny famokarana teo aloha, miampy fiatoana / fahatapahana fikosoham-bary mandritra ny fialantsasatra krismasy. Ireo mpamatsy dia manolotra fiakarana vidiny fanampiny. Mitohy ny tolona ataon'ny ivon-toerana fanompoana mba ahazoana marim-bola azo ekena. Ratsy ny fomba fijery ara-toekarena.
Ny vokatra famokarana UK dia nitohy niharatsy, tamin'ny Desambra. Na izany aza, mpaninjara vy maromaro no sahirana tamin'ny fiomanana amin'ny krismasy. Mandanjalanja ny fividianana kaomandy, hatramin'ny fialantsasatra. Ny fihetseham-po ratsy dia nanjavona hatramin'ny fifidianana ankapobeny. Ireo mpamatsy vokatra vita amin'ny vanja dia mampiakatra ny vidiny. Betsaka ny fifampiraharahana natao tamin'ny faran'ny volana desambra teo, izay mitentina 30 pounds eo ho eo isan-taonina ny haavony raha oharina amin'ny tamin'ny fotoana nandraisana azy teo aloha. Fihetsiketsehana fanampiny no aroso fa ny mpividy dia manontany tena raha maharitra izany, raha tsy mivoatra be ny tinady. Tsy sahy mametraka baiko mandroso be ny mpanjifa.
Maromaro ny fisondrotana ny vidiny teo amin'ny tsena Belza, tamin'ny tapaky ny volana desambra lasa teo. Mills, manerantany, dia nanararaotra ny fiakaran'ny vidim-pidirana hampandroso ny vidin'ny vy. Tany Belzika, ny mpividy vy dia nanaiky ihany fa mila mandoa bebe kokoa, na dia kely noho ny naroson'ny mpanao vy aza. Izany dia nahafahana nanohy ny hetsika fividianana. Na izany aza, mampametra-panontaniana ny mpividy ny fanambarana fa niova be ny tena fangatahana. Ny fiakaran'ny vidim-piainana manaraka dia tsy azo antoka amin'ny toe-tsena ankehitriny.
Ny fangatahana Espaniôla momba ny vokatra fikosoham-bary dia milamina ankehitriny. Ny sanda fototra dia niverina tamin'ny volana Janoary. Ny fiakaran'ny vidim-piainana dia nanomboka tamin'ny tapaky ny volana desambra ary notazonina, tamin'ny fiverenan'ny fialantsasatra eo an-toerana. Nandeha ny Destocking, tamin'ny voalohan'ny volana desambra. Ankehitriny, mila manafatra indray ny orinasa. Mangataka ny hampiakarana ny vidiny ny mpamokatra ho an'ny fanaterana ny volana martsa ary hiakatra mihitsy aza ny vidin'ny volana aprily. Na izany aza, manomboka ny fahatongavan'ireo fitaovana mora, avy amin'ny loharanom-bolan'ny firenena fahatelo, nosoratana tamin'ny Oktobra / Novambra. Mety hiasa amin'ny buffer izany raha tsy ny fiakaran'ny vidim-piainana any an-toerana.
Fotoana fandefasana: Okt-21-2020
Manohana ny rebar eropeana ...
Ny vidin'ny vy eoropeana dia averina ho toy ny import ...
Address: RM 907, NO.377, Làlana JINGAO, PUDONG, SHANGHAI, CHINA
Fitaovana fiasan-damba mafana vita amin'ny vy vita amin'ny vy, Tct Circular Saw Blade Fa Metal, Hss M2 Boribory Saw Blades, Tct Circular Saw Blade, Tct Boribory Saw Saw, Hss M35 Boribory Saw Saw,